Tabaha loogu talagalay Noocyada in lagu ilaaliyo Quudinta Twitter-ka ee Dheelitiran | Martech Zone
Tilmaamaha loogu talagalay Noocyada inay Joogteeyaan Quudinta Isku-dheelitiran ee Twitter
Sabti, Agoosto 16, 2014 Sabti, Agoosto 16, 2014 Douglas Karr
Waxaan qabanay waxyaabo aad u yar si aan kor ugu qaadno hawlgalkeena Twitter dhawaan. Waxaan rumeysanahay in kooxda Twitter-ka ay aad uga cadho badneyd hagaajinta tayada iyo ka saarida khayaamada… waana muujineysaa. Ku saabsan Martech Zone twitter koontada, waxaan ka shaqeyneynay raadinta iyo raacitaanka koontooyin cusub, la wadaagno macluumaadka caanka ah dhammaan shabakadaha, ku darno sawirro iyo fiidiyoow si loo xoojiyo kaqeybgalka, iyo kormeerka warbixinteena si aad u dhow.
Celceliska sumadda Mareykanka ayaa dirta 221 tweets asbuucii. Tweet kasta waa fursad si toos ah loola xiriiri karo macaamiisha; laakiin haddii ay si fudud is-dhiirrigelin u yihiin, magacyadu way lumin karaan dareenka dhagaystayaashooda. Xaqiiqdii, 61% dadku waxay yiraahdaan waxaan u jareynaa xiriirkooda bulsheed summad aan siinaynin waxyaabaha ku habboon In kasta oo saamiga saxda ahi ku kala duwan yahay ganacsiga iyo ganacsiga, maalinba maalinta ka dambaysa iyo xitaa daqiiqad daqiiqad ah - caqli, iskudhaf isku dhafan oo ah waxyaabaha la daaweynayo ayaa abuuri doona summad adag oo leh joogitaan bulsho oo caafimaad leh. Sproutsocial: Ma Dayactireysaa Quudinta Caafimaadka ee Twitter?
Infographic-kaani wuxuu ka hadlayaa isku dheelitirka ujeedada tweets-kaaga. Ha iloobin inaad sidoo kale la wadaagto noocyada kala duwan ee tweets feeds Quudinta Twitter-ka waxay noqoneysaa caajis qurux badan markay yihiin durdurro aan dhammaad lahayn oo cinwaano iyo xiriirinno ah. Ku dar wadahadal aan lahayn xiriirin, si toos ah uga soo qaad sawirrada barnaamijyada Twitter-ka, kuna xir cinwaankaaga Youtube-ka si aad iskood ugu daabacdo Twitter. Iyo haddii aad lumiso kuwa raacsan, hubi noo infographic info, Maxay Tahay Sababta Ay Dadku Uga Reebayaan Twitterka.
Tags: tilmaamaha sumaddatilmaamaha twitter brandwaxbarashadabaraha bulshadacaafimaad twitterinteractiveisweydaarsiga isweydaarsigaqoraalo shaqsiyeedshaqsiyaadka tweetsfarriimaha xayeysiiska ahla xiriiratweets la xiriirawarbaahinta bulshadaTwittertalooyinka twitter
Afduubku War Maaha Istaraatijiyad Xun - Haddii Aan La Naxarin
Ma ahan in Qofkasta oo kula macaamilaya uu Macaamil yahay